Haddii aad caawimaad u baahantihid - Krisinformation.se
TB15 Du som behöver hjälp So
Dad badan oo da’ ah iyo dadka ka tirsan kooxaha khatarta ku jira waxay siyaabo kala duduwan ugu baahan karaan caawimaad inta ay socoto aafadani. Halkan waxaa ku jira macluumaad ku aaddan sida aad ku heli kartid caawimaad iyo taageero.
Haddii aad u baahantihid in lagaa caawiyo cunto soo iibsasho ama dawo soo qaadasho waxaad la xiriireysaa degmadaada. Halkan waxaad ka heli kartaa liis ay ku qoranyihiin degmooyinka Iswiidhan oo dhan. Waxay ku jawaabayaan Iswiidhish iyo Ingiriis. Ha ku caawiyo qof saaxiib ama xigto ah haddii aadan keligaa wax wacan karin.
Kala bar oo bar degmooyinku waxay iskaashi la leeyihiin Kooxo keyd ah oo iskood isu xilqaamay (FRG) oo ka kooban ururro difaac oo iskood isu xilqaamay oo degmooyinka ka caawiya in ay u soo adeegaan kooxaha khatarta ku jira.
Degmooyinka aysan ka jirin FRG waxaa markaas wax caawinaya Laan-qeyrta cas, Badbaadi carruurta, Urur diimeedka masiixiga ee magaalada, Kaniisadda Iswiidhishka iyo Ururka qaranka ee isboortiga. Dhawr degmo waxay hayaan xalal kale. Wac ama e-mail u dir degmadaada si aad wax dheeraad ah uga ogaatid sida aad caawimaad ku heli kartid.
Bogga intarneetka ee ayaad ka heleysaa macluumaad la ururiyay oo ku aaddan taageerada iyo kheyraadka loogu tala galay dadka da’da ah. Boggu waa af-Iswiidhish.